कार्यकारी आदेशमार्फत बाइडेनले लगाए ३० देशबाट अमेरिका आउनमा रोक, कसकसलाई छुट? « Khasokhas
कार्यकारी आदेशमार्फत बाइडेनले लगाए ३० देशबाट अमेरिका आउनमा रोक, कसकसलाई छुट?
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोरोनाको महामारी फैलिनबाट रोक्ने उद्देश्यले ३० देशबाट अमेरिका आउनमा रोक लगाउने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बाइडेनले युरोपका शेंगेन क्षेत्रका २६ देशहरु, यूके, आयरल्याण्ड, ब्राजिलसहित दक्षिण अफ्रिकालाई पनि प्रतिबन्धको सुचीमा थपेका छन् । चीन र इरानमाथि ट्रम्पले लगाएकै कार्यकारी आदेशको रोक जारी छ ।
मंगलबार बाइडेनले जातीय समानताका सन्र्दभमा कार्यकारी आदेश जारी गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै बाइडेनले मंगलबार जेलको अवस्था सुधारका लागि र प्राइभेट जेलहरु बन्द गराउने प्रकृयाको सुरुवातका लागि कार्यकारी आदेश जारी गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
एसियन अमेरिकन र प्यासेफिक आइल्याण्डरमाथि आवासमा हुने गरेको विभेद अन्त्यका लागि पनि मंगलबार बाइडेनको कार्यकारी आदेश जारी गर्ने जनाइएको छ । त्यस्तै तेश्रो लिंगीलाई सेनामा सेवा गर्नका लागि लगाइएको रोक पनि बाइडेनले उल्टाउने अपेक्षा गरिएको छ ।